Ebla 14, 2021
Faayilii - Adabaabaayii Sumuudaa, Magaala Hawaasaa
Murtiin hiree murteeffannaa naannoo ta’uu kan godinaalee shan kibba gama dhiyaa Itiyoopiyaatti argaman shanii fi kan aanaa addaa tokko filannoo biyyoolessaa ja’affaa waliin guyyaa tokko akka ta’u murteessuun isaa uummata sagalee kennutti burjaajii hin uumu jechuu dhaan boordiin filannoo beeksisee jira.
Hojii hiree murteeffannaa uummataa kanas raawwachiisuuf qarshiin miliyoonni 7 ol qophaa’uun illee beekameera jedha gabaasi Yoatan Zebdwoos Hawaasaarra erge.
Gorsituun dhimmootii kominikeeshinii boordii filannoo Itiyoopiyaa Sooliyaanaa Shimellis, hireen murteeffannaa naannoon hundeeffamuu kan kibba gama dhiyaa Itiyoopiyaa fi filannoon biyyoolessaa wal faana geggeessamuun uummata sagalee kennutti burjaajii hin uumu jedhan.
Uummati sagalee kennu amma iyyuu taanaan Finfinnee fi Dirre Dhawaa irraan kan hafe akka karoora keenyaatti mana maree bakka bu’ota uummataaf mana maree naannoof filannoo lama geggeessu.
Kanaaf gaaffii tokko iyyuu hin qabu. Filannoo mana maree bakka bu’otaa fi mana maree naannoof geggeessamu irratti waraqaa sagalee itti kennan itti dabalaa tokko kennuu dha. Waraqaa sagalee kennan sana irratti uummati sagalee kennu mallattoo isaanii kaa’u. filannoo isaanii idilee ka biroo illee ni geggeesseu. Kanaaf waraqaa filannoo tokko dabalamuu isaa malee dhimma wal xaxaa ka biroo hin qabu.
Ennaa filannoo hiree murteeffannaa Sidaamaa irraa muuxannoo argatan caamsaa 28 bara 2013 filannoo geggeessamuuf akka fakkeenya gaariitti gargaaramna jedhan. Itiyoopiyaa kibba lixaatti naannoo tokko hundeessuf filannoon hiree murteeffannaa bakki itti geggeessamu, Kafaa, Shakkaa, Daawroo, Beenchi Shakkoo, Omoo Lixaa fi aanaalee addaa kontaa ti .
Waraana Keenya Afgaanistaan Keessaa Baasuu Qabna: Prez. Baaydin
Baaydin Kongrasaaf Haasawaa Dhageesisuuf Jiru: Waayit Haawuus
Beellamni Obbo Jawaar Mohammad'faa Guyyaa Biraatti Dabarfame